Fizahan-tany fitsaboana? Ary ahoana ny amin'i Damasy, Syria?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Syria » Fizahan-tany fitsaboana? Ary ahoana ny amin'i Damasy, Syria?
Aprily 22, 2017
Mila fandidiana plastika fa tsy afaka mandoa saram-bola amerikana na eropeana? Maninona raha mandeha any Damasy, Syria.
Nahita fisondrotana goavambe tamin'ny fizahan-tany fandidiana plastika i Damasy satria ny fihenan'ny vidin'ny pounds Syriana dia nahatonga ny toerana ho malaza indrindra ho an'ireo izay te-hitahiry vola amin'ny fandidiana lafo vidy.
Hoy ny marary iray: Nandeha tsara daholo ireo fivoriana telo, ary nahafinaritra ny valiny, indrindra raha ampitahaina amin'ny downtime izay saika tsy nisy. Faly aho tamin'ny vokan'ny fanesorana ny volo tamin'ny laser. ”
Ity tantara tsy mampino ity dia navoaka tao amin'ny Gulf News androany maraina:
Tsy misy isa ofisialy azo avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana Syriana amin'io lafiny io, fa raha ny filazan'ny dokotera mbola miasa ao Damasy, ny ankamaroan'ny mpizahatany dia avy any Iràka, Libanona, Oman ary Algeria.
Zeinab Khalidi, mpanao mari-trano 46 taona avy ao amin'ny Oniversiten'i Baghdad dia iray amin'izy ireo, izay tonga vao haingana tany Damasy mba hanaovana fandidiana.
Miresaka an-telefaona miaraka amin'i Gulf News avy any Iràka, hoy i Zeinab: “Nampitandrina ahy ny olona tsy hanao dia, ary nilaza fa tsy azo antoka i Damasy. Mampihomehy tokoa ny maheno izany rehefa mipetraka ao amin'ny tanàna toa an'i Baghdad ianao, izay na eo aza ny fahitana ny mahazatra, dia mihasarotra sy mampidi-doza ny fiainana. ”
Manohitra an'izay rehetra mety hitranga dia tonga tany Damaskosy i Zeinab mba hiasa orona tamin'ny volana aogositra lasa teo, tamin'ny filazany: "Tafiditra ao anatin'izany, miaraka amin'ny fandaniana amin'ny dia, hopitaly, fanafody aorian'ny fandidiana ary ny saram-pitsaboana dia ambany ny vidiko $ 800 (Dh2,940)."
Eny tokoa, i Damasy dia mijanona ho takatry ny vidin'ny vahiny, noho ny fihenan'ny vidin'ny vola Syriana amin'ny dolara amerikana.
Enina taona lasa izay, ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny $ 100 dia 5,000 pounds Syriana fa izao dia 55,000 pounds Syriana.
Khaled Mansour, mpandidy plastika efa niofana tany Paris, izay mitantana ny tobim-pahasalamany any amin'ny faritr'i Al Afif any Damaskosy, dia nilaza tamin'ny Gulf News fa ny tahan'ny teatra fampandehanana hopitaly ao an-drenivohitra Syriana, izay omen'ny mpandidy mialoha ny hopitaly rehetra, dia ambany noho ny $ 100 izao.
Any Libanona, misy $ 1000-1500 isan'ora izy io, manazava ny antony ahafahana mandoa kely kokoa amin'ny fandidiana any Damaskosy.
"Na dia talohan'ny nanombohan'ny ady aza, dia isika no mora indrindra sy tsara indrindra teto amin'ny faritra" hoy i Mansour, izay manao asa 7-9 isan-kerinandro.
"Saingy indrisy, ny ady dia nanery ny mpitsabo tsara indrindra ao amin'ny firenena hiala sy hitady fotoana tsara kokoa eny an-tsambo," hoy izy, ary nanampy fa manodidina ny 50 isanjaton'izy ireo no efa niala. "Ny sazy amerikana dia nisy fiatraikany ratsy teo amin'ny sehatry ny fitsaboana syriana," hoy i Mansour.
Ny sazy amerikana sy eropeana dia nanakana ny orinasa frantsay sy alemanina lehibe tsy hivarotra fitaovam-pitsaboana sy fanafody ho an'ny tsena syriana.
Mitentina 2 tapitrisa dolara ny milina MRI iray. Alohan'ny ady dia azo tanterahina ao anatin'ny telo taona ny fiverenana amin'ny famatsiam-bola saingy haharitra 30 taona vao hatao izany.
Reem Al Ali, programmer informatika iray avy any atsimon'i Libanona, dia nilaza hoe: "Nandeha fandidiana bypass aho tany Syria tamin'ny taon-dasa, noho ny torohevitry ny namana iray izay nodidiana tao tamin'ny taona 2014. Nijanona tany amin'ny hopitaly kilasy A aho $ 60 isaky ny andro. Any Beirut, mety ho lafo $ 1000-1500 isan'andro aho. Tena afa-po aho ary mbola manaraka ny dokotera amin'ny alàlan'ny WhatsApp. ”
Nilaza i Al Ali fa nihaona tamina dokotera telo tany Damasy izy izay ny roa nianatra tany Etazonia ary ny iray tany Frantsa. “Tsy ampoizinao izany any amin'ny firenena miaina amin'ny ady an-trano.”
Mimenomenona ny dokotera fa ambany dia ambany ny sarany nefa tsy maintsy mandoa vidiny lafo loatra amin'ny serivisy isan-karazany. Nilaza izy ireo fa noteren'ny minisiteran'ny fahasalamana tsy handoa mihoatra ny 700 pounds syriana (1,2 $) ho saram-pitsaboana. Na dia manara-dalàna aza ny dokotera sasany, matahotra ny sazy sy sazy, maro no tsy mandoa hatramin'ny $ 10, izay avo indrindra amin'ny fenitra Syriana.
Noho ny fanapahana herinaratra lehibe eto an-drenivohitra Syriana, izay afaka mitohy mandritra ny adiny efatra any amin'ireo distrika fonenana mandehandeha ao Damasy, dia nametraka mpamokatra herinaratra goavambe ny hopitaly rehetra. Ireo generator ireo dia mihazakazaka amin'ny gazoala na benzène, ireo solika roa tsy maintsy vidiana amin'ny tsena mainty.
Ny vidin'ny benzena dia nisondrotra 450 isan-jato tao anatin'ny dimy taona lasa, ary amidy amin'izao fotoana izao dia 225 pounds Syriana litatra.
Dimy taona lasa izay, ny lasantsy ampiasain'ny fanjakana dia amidy amina 50 pounds syriana litatra ary mora azo any amin'ny firenena namokatra solika ho azy, fa ankehitriny kosa eo am-pelatanan'ny Daesh avokoa ny tanimbary. Ny vidin'ny diesel dia nisondrotra hatramin'ny 135 pounds syriana litatra ka hatramin'ny 160.
Na izany aza, ny asa dia mijanona ho mora vidy ihany, izay ny karaman'ny mpitsabo mpanampy tsara dia mitentina $ 100 isam-bolana, na dia taorian'ny didim-pitsarana navoakan'ny filoham-pirenena tamin'ny taon-dasa aza, dia nampiakarina 7,500 XNUMX pounds ny mpiasam-panjakana.
Etihad Airways ao amin'ny ATM: vondrona fampirantiana finday dia manome traikefa miavaka amin'ny vokatra sy serivisy ho an'ny delegasiona
Miverina amin'ny fifindra-monina mankany Syria
3 minitra lasa izay